China SEBIC 20 mirefy mini lalana azo ahodina ebike orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Funncycle
Laharana maodely BEF-SW20S
MOTOR mahery 250W-350W:Miaraka amina motera haingam-pandeha haingam-pandeha 350W, miorina amin'ny kodiarana any aoriana, mampitombo ny herin'ny fiakarana havoana matanjaka kokoa, manome hery ampy ho an'ny fivezivezena isan'andro, mandeha eny an-tendrombohitra na mihodina amin'ny lalana tianao indrindra. Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 20 mph, hitondra anao haingana any ianao. Mifanaraka mora amin'ny terrains isan-karazany, mitondra anao hankafy ny fialamboly ivelany.
BATTERY & FITSARATRA FITSIPIKA:Ny bateria azo esorina 36V 8AH azo esorina dia manohana ny 22-25mile (Mode E-Bike) ka hatramin'ny 44-50 kilometatra (Mode Assed). Azonao atao ny mampiditra vola amin'ny ebike amin'ny alàlan'ny fahafaham-ponao. Ampiana miaraka amin'ny charger bateria lithium marani-tsaina, ny famahanana haingana dia mila 4-6 ora fotsiny. Fitaovana headlamp LED ho an'ny mandeha alina azo antoka kokoa.
MIFETRAKA PAOLIKA elektrika:Ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra dia mampiasa endriny firaka aliminioma maivana. Mora mivalona sy mitahiry. Azonao atao ny mametraka azy io mora foana ao anaty vatan'ny fiara. Fitrohana hatavezina indroa, izay mampihena tsara ny vombony. Paingotra matihanina 7-hafainganam-pandeha, freins eo aloha sy aoriana frein, manome traikefa ahazoana aina bebe kokoa. Ankoatr'izay, ny seza, ny zoro ary ny halavan'ny fotony dia azo ahitsy mba hifanaraka amin'ny filan'ny haavo samy hafa.
Fomba fiasa 3:E-bisikileta & bisikileta manampy & bisikileta mahazatra. Miaraka amin'ny bokotra LED metatra haingam-pandeha 3, azonao atao ny misafidy ny maody haingam-pandeha 3 amin'ny bisikileta elektrika sy bisikileta fanampiana. Ny maodely mitaingina telo dia mora miondrika amin'ny fahafinaretana mandritra ny dia lavitra, ary koa fanatanjahan-tena.
SERVICE:Miaraka amin'ny antoka maharitra herintaona ho an'ny motera herinaratra, bateria, charger, mpanera ary dashboard, aza manahy ny hampiasana azy. Tonga any 85% na 95 tafangona ity bisikileta elektrika ity. Tsy sarotra ny mamita irery ny fivorianao. Raha misy olana amin'izany dia aza misalasala mifandray aminay, ary hamaly azy izahay ary hamaha azy ao anatin'ny 24 ora.
Teo aloha: Moto SEBIC New Style Central Suspension 16 Inch bisikileta mandeha amin'ny kodiarana iray
Manaraka: SEBIC 26 mirefy aloywheel tanàna bisikileta fanamoriana herinaratra maotera